XIX सताब्दी को 50-60 वर्ष - रूस को लागि एक बरु कठिन समय। यो नयाँ समर्थक-लोकतन्त्र सेना को उद्भव र serfdom को mainstreaming जडानमा भयो कि एक व्यापक सामाजिक क्रांति द्वारा चिन्ह लगाइएको थियो। यो पृष्ठभूमिमा विरुद्ध, ठूलो स्वरमा को पुस्तामा र अझै पनि देश को सबै भन्दा मा व्याप्त एक पितृसत्तात्मक सोचले मा रूसी महिला को अवस्था बीच अवस्थित विरोधाभास कुरा।
यस्तो कठिन अवस्थामा, यो लेखिएको थियो, र त्यसपछि मञ्चमा राख्नु भएको थियो, र एकदम ती वर्ष मा सनसनीखेज प्रकाशित उत्पादन Ostrovsky।
नाटक मा काम को कालक्रम
धेरै प्रश्न प्ले "आंधी" को सृष्टिको इतिहास छ। छोटकरीमा यसलाई निम्नानुसार वर्णन गर्न सकिँदैन।
Ostrovsky, सम्भवत, जुलाई 1859 (कुनै पनि मामला मा, छैन पछि यो महिना) मा उत्पादन कार्य शुरू भएको छ, र प्रारम्भिक अक्टोबर मा प्रकाशन लागि तयार पाठ पठाए। यो मूल पांडुलिपि अझै पनि रूसी राज्य पुस्तकालय भण्डारण गरिएको छ भनेर प्रमाणित गर्छ। एक महिना पछि, प्ले पीटर्सबर्ग मञ्चमा राख्नु भइरहेको छ: - अलेक्जेन्ड्रिया मा नोभेम्बर 16, MALY थियेटर,2डिसेम्बर मा premiered थियो। यो "पढाइ लागि पुस्तकालय" (№1 मा) मा प्रकाशित भएको थियो निम्न वर्ष पछि एक पुस्तक रूपमा प्रकाशित।
प्ले को उपस्थिति को प्रगतिशील मन को प्रतिक्रिया
नयाँ नाटक पहिले नै प्रसिद्ध "कोलम्बस Zamoskvorechye" प्रतिक्रिया र टिप्पणीहरू एक आँधी संग भेट भएको थियो, दुवै सकारात्मक थियो (जस्तै, मूल्यांकन N.Dobrolyubova, I.Goncharova, P.Pletneva) र आलोचक (टोलस्टोय, ए Fet)। Ambiguously नयाँ बच्चा Ostrovsky कथित र गर्दा D.Pisarev आलोचक पहिचान, Dobrolyubov संग विवाद मा मुद्दाहरू एक नम्बर मा यस सन्दर्भमा आए। जो यो थियो, "तूफान" सधैंभरि playwright को सबै भन्दा राम्रो नाटकहरु बीचमा। तर निश्चय पनि वास्तविक इनाम ठूलो Uvarov पुरस्कार मात्र चरणको लागि लेखिएको साँच्चै ठूलो काम को लागि लेखक द्वारा प्रस्तुत हुनेछ।
कथा र वर्ण
प्ले "आंधी" को सृष्टिको इतिहास एक सुन्दर नाम Kalinov, को वोल्गा को बैंकहरू मा स्थित संग एउटा सानो सहरमा प्रकट नाटक को कार्य गर्न धेरै हदसम्म कारण छ। शान्ति र शान्त एक अर्थमा दिंदै भव्य परिदृश्य: तिनीहरूले भेट्दा उहाँले एकदम सन्तोषजनक जस्तो देखिन्छ। एक दर्शक एक स्थानीय निवासी देखि सुन्नुहुन्छ भन्ने पहिलो वाक्यांश को: "सौन्दर्य" तर तपाईं वर्ण को मूड र परिवर्तन को सामान्य वातावरण अन्वेषण रूपमा। Playwright कौशलतासाथ शताब्दीयौंदेखि Domostroi व्यवस्था लागि जीवित, समाज को दुष्कर्मलाई खुला गर्छ। तसर्थ, सायद, शहर को नाम - Kalinov, रूसी लोकगीत आए। यसलाई तोड्न गाह्रो छ जो बसे, ठीक छ, "शानदार" संसार प्रतीक छ।
र "दुष्ट" र आफ्नो सरकार विरुद्ध बाहिर बोल्न निर्णय गर्ने मानिस देखिन्छ शक्तिशाली सेना, बीच - Katerina। किनभने यो अझै पनि कुनै पनि जस्तै-दिमाग मान्छे वा रक्षक (प्रतिनिधित्व, उदाहरणका लागि, एउटै मानिस), सुरुमा विरोध गर्न सहयोग सक्षम फेला गर्दैन हेरोइन भाग्य, दुःखद छ। त्यो देख्नुहुन्छ जसमा उनको भविष्य आनन्द र राम्रो जीवन जवान, पनि कायर, साँच्चै क्याथरीन साकार छैन। एक समयमा सबै नैतिक सिद्धान्तहरू नष्ट गर्दा गाह्रो केटी मृत्यु अपराधियों फेला पार्न छ।
कथा को मूल भन्दा विवाद
प्रोटोटाइप र धेरै विरोधाभासी काम आधारित कथा बारेमा बयान। त्यसैले, "तूफान" को कोस्ट्रोमा रचनात्मक इतिहास लागि सीधा आफ्नो शहर मा हाल दुःखद घटना सम्बन्धित थियो खेल्छ। केही विवरण प्रोटोटाइप क्याथरीन परिचित L.P.Kositskaya लेखक बन्न सक्ने औंल्याए छन्। Ostrovsky को परिणाम वोल्गा साथ यात्रा - व्यक्तिगत playwright थाह गर्ने मान्छे, "तूफान" को उपस्थिति कि विश्वास गरे।
एउटै यस्तो न्यायलाई कारण थिए?
को कुकुर परिवारको शोकमा
पहिलो संस्करण, "तूफान" कोस्ट्रोमा शहर मा घटना सम्बन्धित टुक्रा इतिहास अनुसार। नोभेम्बर 1859 को सुरुमा उहाँले मात्र 19 वर्ष पुरानो थियो शहर Aleksandra Klykova, को बासिन्दा एक बेपत्ता। पछि उनको शरीर पनि वोल्गा को पानी फेला, र यो वास्तवमा मा उत्साहित आपराधिक मामला थियो। आत्महत्या वा हत्या र अपराध लुकाउन प्रयास: दुई संस्करण छलफल। जांच केटी भर्खर विवाह भएको थियो प्रकट, र त्यो व्यापारी परिवार, पूर्ण भारी-हाथ प्रभुत्व जो फसे र कुनै एक मा-व्यवस्था विश्वास गर्दछन्। एक फरक वातावरणमा हुर्केका, अलेक्जेन्डर असमर्थ आफ्नो भाग्य संग सर्तहरू आउन र नयाँ परिवार मा बसोबास थियो। को सानो आमा वरिपरि शान्त, आज्ञाकारी, - त्यो फेला गर्नुभयो पतिको समर्थन। यी सबै विवरण सजिलै नाटक मा चिन्न छन्। पुस्तक कोस्ट्रोमा स्थानीय मा देखा पछि निरन्तर "तूफान" को सिर्जना सीधा परिवार कुकुर को जीवन संग सम्बन्धित खेल्छ भन्ने तथ्यलाई बारेमा कुरा किन हो। यो उत्पादन शोकमा अघि एक महिना लिखित गरिएको पछि बाहिर गरिएका भए तापनि एक लामो समय को लागि स्थानीय दृश्य मा खेल्छ जो अभिनेता बस सात कुकुर अन्तर्गत बनेको छ। कथित पानी Caterina अलेक्जेन्डर मा कूद जो देखि वोल्गा को बैंक, एउटा ठाउँ स्थानीय आकर्षण हुन्।
हावाहुरीमा - यो व्यक्तिगत नाटक Ostrovsky छ?
मुख्य पात्र को प्रोटोटाइप सन्दर्भमा अर्को संस्करण, को playwright पदका चिनारी संग सम्बन्धित छ। अर्को त्यो आफ्नो सपना Varenka बताएको मा क्याथरीन स्वगत, गर्न तिनी यसो भन्छन्: "म एल.पी. सुनेको छु एउटै सपना ... "एल.पी. लागि बारेमा एक प्रसिद्ध अभिनेत्री L.P.Kositskaya, जो Ostrovsky संग, सबै भन्दा संभावना छ, एक सम्बन्ध थियो लुकाउने। आफ्नो स्नेह लुकाउन परिवार मान्छे त compelled - दुई। अनुसन्धानकर्ताहरूले प्ले "आंधी" Ostrovsky सिर्जना व्याख्या र यो जारी हेर्दै, पहिलो पटक मुख्य पात्र को भूमिका Kositsky प्ले छ भन्ने तथ्यलाई उल्लेख। एक playwright म MALY थिएटर मा आफ्नै काम को प्रदर्शन को लागि अभिनेता चयन गर्न रुचि, ज्ञात छ।
को वोल्गा साथ एक यात्रा
अन्तमा, तेस्रो र थप सम्भावित संस्करण - "तूफान" ठूलो रूसी नदी को लेखक को यात्रा सम्बन्धित टुक्रा को कथा।
को गर्मी महिनामा, 1856-57 वर्ष Ostrowski को वोल्गा मा रूसी भौगोलिक समाज को यात्रा मा भाग। उहाँले, नदी को बैंकहरू मा स्थित धेरै गाउँमा भ्रमण आफ्नो जीवन को एक विशेष तरिका सिक्न भेट र स्थानीय एक लामो कुराकानी भएको थियो। Ostrovsky धेरै दृष्य व्यक्तिगत परिवार र पूरै रूपमा शहरमा फैलाउनु साक्षी छ। उहाँले पछि पनि निबंध मा विश्लेषण जो सानो विवरण, रुचि थियो "यात्रा वोल्गा साथ।"
यी अवलोकन को प्रतिध्वनिहरु नाटक पाउन सकिन्छ: मान्छे को जीवित भाषा, मान्छे बीच संचार को विशिष्ट दृश्य, सुन्दर इलस्ट्रेटेड (, प्रसंगवश, अक्सर सीधा षड्यन्त्र सम्बन्धित छन् जो, तर राम्रो शहर को समग्र वातावरण चिनारी), र विभिन्न दल, विशेष गरी जीवन। यो सबै प्ले "आंधी" को इतिहास Ostrovsky आफ्नो व्यक्तिगत अवलोकन मा स्रोत र बाहिर आंकडा, रूसी मान्छे जीवित के जो सम्पूर्ण रूसी सार्वजनिक क्रम विकास hinders प्रयास पुष्टि गर्छ।
यसरी, शरद ऋतु 1859 मा कोस्ट्रोमा मा भयो कि शोकमा, को XIX सताब्दी को बीचमा रूसी व्यापारीहरू विशेष गरी जीवन थियो जो Ostrowski, प्रत्याशा थियो। यो रूसी राज्य विशाल क्षेत्रमा बस्ने कुनै पनि परिवार मा हुन सक्छ कि एक विशिष्ट अवस्था हो। पुरानो सेना अझै बाहिर जाने अपनाउँछन् र आफ्नो शक्ति को संरक्षण गर्न सबै हालतमा प्रयास गर्दा Playwright सफलतापूर्वक क्षण चित्रण गरिएको, र नयाँ, बस उदीयमान, एक उकालो युद्धमा प्रवेश, नतिजा जो रूस को भाग्य निर्धारण गर्नेछ। यो पृष्ठभूमिमा त महत्त्वपूर्ण छैन विरुद्ध, प्ले "आंधी" को सृष्टिको इतिहास के जोडिएको छ। मुख्य कुरा यो देश को जीवन भर प्रगतिशील परिवर्तनको शुरुवात हुन सक्ने छ।
रूसी लेखक Daniil Granin: जीवनी, रचनात्मकता, फोटो
Sergey Pereslegin: जीवनी र काम
"फ्लाइङ पोत" - रूसी लोक कथा। प्लट र वर्ण को विवरण
जुचिन पकाउने के साथ? के तपाईले ओवनमा जुकुनीलाई पकाउन सक्नुहुन्छ, बहु-भण्डार आहारमा? छोराछोरीसँग जुक्चि के गर्न सक्छ?
सारा गहुँ रोटी - यो जीव आफ्नो फाइदाको के हो?
प्रकृतिका आचरणको नियम: खेद भन्दा राम्रो सुरक्षित
आकर्षक शहर - भियना
आधुनिक बजार सम्बन्ध र "कालो" अर्थव्यवस्था: अवधारणा को व्याख्या
सामाजिक खतरनाक परिणाम: अवधारणा, प्रकार, सुविधाहरू, मान, आकार,